ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ခရစ်တော်၏ ပြင်းထန်သောဝေဒနာ | Christ's Agony in Gethsemane | Real Conversion
၂၀၁၂၊ မတ်လ၁၈ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင် ဘုရားနေ့ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက်၊ အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊မြေပေါ်၌ကျသော သွးစက်ခဲကဲသို့ဖြစ်သတည်း (လုကာ၂၂း၄၄)။
လွန်ခဲသော တနင်္ဂနွေည၌ “ယေရှု၏မျက်ရည်”အကြောင်းကို ဝေငှာခဲ့သည်။ ဤနေရာ ၌နှိပ်ပြီး အင်တာနက်တွင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ဒေသနာတော်၏ အဆုံးသတ်နိဂုံး၌ “ဂေသရှေ မန်ဥယျဉ်တော်၌ ယေရှုငိုကြွေးခြင်း” အကြောင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဟောကြားခဲ့သည်မှာ “ကားတိုင်ပေါ်အသေမခံခင် ယေရှုသည်အထီးကျန်ဆန်စွာဖြင့် ဂေသရှေမန်ဥယျဉ်တော်၌ ဆုတောင်းပဌာနာပြုခဲ့သည်ဟူ၍ ဟောကြားခဲ့သည်။ ဂေသရှေ မန်အမှောင်ထုညတွင် ကယ်တင်ရှင်သည် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားထံအသနားခံဆု တောင်းခဲ့ပါသည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၅း၇အရ၊ယေရှုသည် “ကြီးစွာသောကြွေး ကြော်ခြင်း၊မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွှံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာ ရသည်ဖြစ်၍” (ဟေဗြဲ ၅း၇)၌ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဘယ်အရာကို ကြောက်ရွှံ့ပါသနည်း? “ကားတိုင်ပေါ်အပြစ်သားတို့၏ အပြစ်ကြွေးအတွက်အသေမခံရပဲ၊ ထိုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ် တော်၌ သေဆုံး”မည်ကို ကြောက်ရွှံ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
“နောက်တနေ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေခံရန်အတွက်ထိုနေ့ည ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်၌ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်စေရန် ယေရှုသည်သေခြင်းခွက်ဖလားကို ရွှေ့ပေးဖို့ဆု တောင်းခဲ့သည်”ဟူ၍ဟောကြားခဲ့သော ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်၏ တရားဒေသနာတော် ကို ကျွန်ုပ်ကိုးကား ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာဂျေအိုလီဗါ ဘားစ်စဝေလ် ဟောကြားသကဲသို့ “ယေရှုသည်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ အလိုတော်ကို ပြည့်စုံဖို့အလို့ငှါ၊ ဥယျာဉ်တော်၌ သေခြင်းမှလွန်မြောက်ဖို့ရန်ဆုတောင်းခဲ့သည်” ဟူသော တရားဒေသနာတော်ကို ကိုးကားခဲ့သည်။ “မိတ်ဆွေတို့ယေရှုသည် ဥယျာဉ်တော်၌ မသေ ဘဲလွတ်မြောက်လာမည့်အသံကို ကြားခဲ့ပါသည်”ဟူ၍ ဟောကြားခဲ့သော ဒေါက်တာ ဂျေဗန်နုန်မက္ကီး၏ ဟောကြားချက်ကို ကျွန်ုပ်ကိုးကားဟောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အ နေဖြင့် ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ဘုရားသခင်ကသူ့အပေါ် တင်တော်မူ သောအခါ ပြင်းထန်စွာသော ဝေသနာတော်ကိုခံစားခဲ့ရပါသည်။
ထိုသို့ဟောကြားသော တရားဒေသနာတော်ကိုဖတ်ကြားခဲ့သော သူတို့ကဘာ ကြောင့် ယေရှုကားတိုင်ပေါ်သွားရောက်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲဟူ၍ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက် ထိုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ အသေမခံသနည်း? ထိုနေရာ၌ အသေခံခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်လို့ပါဟူ၍ ကျွန်ုပ်ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း၊ ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော် မူ၏ (၁ကော ၁၅း၃)။
ခရစ်တော်သည် နုတ်ကပတ်တော်လာသည့်အတိုင်း အသေခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ kata tas graphas. ဖြစ်၏။ အကယ်၍သာ ယေရှုသည်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ အသေခံခဲ့မည် ဆိုလျှင်၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက ပရောဖက်ပြုချက်အတိုင်း ကယ်တင်ရှင်မှီမည်မဟုတ်ပေ။ သူသည်ဟန်ဆောင်သောသူသာဖြစ်သည်၊ ပရောဖတ်ပြုချက်ပြည့်စုံစေသော ကယ်တင်ရှင် မဖြစ်နိုင်ပေ! သူသည် kata tas graphas အတိုင်း၊ ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသေခံရ မည်ဖြစ်သည်။” ဓမ္မဟောင်း”ကျမ်း”၌ရည်ညွှန်းဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်၍၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသား ခြင်းမရှိသေးပေ၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ မရောက်ခင်၊ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူသည်မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်၏ ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည်ငါ၌ ယ္ခုပင်ပြည့်စုံရမည်။ ငါ့အမှုတရားတို့သည် ပြီးစီးခြင်း သို့ရောက်ကြပြီဟု မိန့်တော်မူ၏ (လုကာ ၂၂း၃၇)။ ယေရှုသည် ဟေရှောယ၅၂း၁၂ကို ရည်ညွှန်းပြီးကားတိုင်ပေါ် လူဆိုးနှစ်ယောက်ကြားဝင် အသေခံရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ် ၍ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ အသေခံခဲ့ပါလျှင်၊ ထိုဟေရှာယ၅၃း၁၂ ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ kata tas graphas အတိုင်း၊ “ကျမ်းစာလသည့်အတိုင်း”အသေခံခြင်းဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။ ပရောဖတ်ဟေရှာယဟောကြားသကဲ့သို့ ပရောဖက်ကျမ်းပြည့်စုံစေသော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် လာမည်မဟုတ်ပေ!
ဟေရှောယ၅၃သည်၊ ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းကိုဖေါ်ပြသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို ယေရှာယ၅၂း၁၃က အစပြုပြီး အခန်းငယ်၁၅အထိ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွင် တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်တွင် ပရောဖက် ပြုချက်ဖြစ်ပြီး နောက်တပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းကို ဖေါ်ပြထား ပါသည်။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌သာ အသေခံမည်ဆိုလျှင်၊ အနည်းကျဉ်းသော ကျမ်းပိုဒ် သာပြည့်စုံမည်ဖြစ်ပြီး ဟေရှာယ၅ဝး၆၌ ဖေါ်ပြထားသည်အတိုင်း “ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို၎င်း၊ မုတ်ဆိတ်ကိုနုတ်သောသူတို့အား ငါ့ပါးကို၎င်း၊ငါအပ်၏။ အရှက်ခွဲ ခြင်းနှင့်တံတွေးထွေးခြင်းမှ ငါသည်ကိုယ်မျက်ကိုမလွှဲဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ပြည့်စုံမည်မ ဟုတ်ပေ။ ဆာလံ၂၂း၆၌ ဖေါ်ပြထားသကဲ့သို့၊ အကျွန်ုပ်၏ခြေလက်တို့ကို ထိုးဖောက်ကြ ၏။ဟူသော ကျမ်းလည်းပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ ဆာလံ၂၂း၆၌ ဖေါ်ပြထားသကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်၏ခြေလက်တို့ကို ထိုးဖောက်ကြ၏ဟူသော ကျမ်းလည်းပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ ဇာခရိ၁၂း၁၀၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ “သူတို့သည် မိမိတို့ထိုးဖေါက်သောငါ့ကိုရှုမြင် ရကြလိမ့်မည်”ဟူသော ကျမ်းစကားလည်းပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ ဆာလံ၂၂၌ပရောဖက် ပြုချက်တို့သည်လည်း၊ ယေရှုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌အသေခံခဲ့သော်၊ ထိုကျမ်းစကား တို့သည်လည်း၊ ပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုဥယျာဉ်တော်၌ အသေခံခဲ့သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ များစွာသောပရောဖက်ပြုချက်တို့ ပြီးပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ “ကြီးစွာ သောကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွှံ့သောအ မှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍(ဟေဗြဲ၅း၇)၌ ယေရှုဘုရားဆုတောင်းနေခြင်းအပေါ် အံ့အားသင့် စရာမဟုတ်ပါ၊ နောက်တနေ့ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသေမခံမှီ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ အသေခံရမည်ကို ယေရှုကြောက်ရွှံ့မိခြင်းဖြစ်ပါသည်! သူသည် kအေအေas gမစေ့as “ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း အသေခံရပါမည်” ခရစ်တော်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတော် မြတ်၌လာသော ပရောဖက်ပြုချက်များကို ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်း တခဏခြင်းတွင်ပြီး ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌သာ ယေရှုအသေခံခဲ့သော်၊ ပရော ဖက်ပြုချက်တို့သည် ပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ၊ လူသားတို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာမည် မဟုတ်၊ လူလိမ်လူညာသာဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ “ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏” (၁ကော၁၅း၃)။ “အိုအဖ၊ အလိုတော်ရှိလျှင် ဤခွက်ကို ကျွန်ုfပ်မှလွဲတော်မူပါ”။ (လုကာ၂၂း၄၂) ဤကဲ့သို့ ယေရှုဆု တောင်းသည်ကို အံ့ဩစရာမဟုတ်ပေ။
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက်အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း (လုကာ ၂၂း၄၄)။
ဂရိဘာသာစကား agသညငမှေagသညပ ပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံစားခြင်းဟူ၍ ဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ “အလွန်ဆိုးဝါးသောစိတ်ခံစားမှုနှင့် ပြင်းထန်သောနာကျင်မှု” အတွက်ပြောဆိုသုံးနှုန်းပါသည်။(ဝိုင်အပြင်းစား)ယေရှုသည်နာကျင်မှုအလွန်အထိပ် ထိုအ မှောင်ထုခံစားခဲ့ပါသည်။ ဒီကနေ့ည၊ ဂေသမန်ဥယျာဉ်၌ ယေရှုခံစားရသောနာကျင်မှုကို မျှဝေခံ စားကြပါစို့။
၁။ ပထမ၊ သူ၏ပြင်းထန်သော ဝေဒနာကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ယေရှုသည်ပဿခါပွဲကို တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ သုံးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သခင့်ညစာ စားပွဲကို ထိုအခါတပည့်တော်တို့နှင့်ဦးစွာ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယုဒသည်ထိုပွဲမှ ထွက်ခွါသွားပြီး ယေရှုကိုသစ္စာဖောက်ရန်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲ့တို့ထံသွားရောက် ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုနှင့်ကျန်ရစ်သောတပည့်တော်တို့သည် ဓမ္မသီချင်းသီဆိုကာ ကေဒြုန် ချောင်းကိုဖြတ်ပြီး အမှောင်ထုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည်နှလုံးပူပန်လျှက်၊ တပည့်တော်ရှစ်ယောက်တို့ကိုထားရစ်ပြီး၊ ထိုင်လျှက်စောင့် နေကြလော့ဟုပြောကာ(မာကု၁၄း၃၂) ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍၊ မိန်းမော တွေဝေခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏၊ ထိုအခါ ငါသည်သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံးအလွန်ညိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ ဤအရပ်၌စောင့်နေကြလော့ဟု တပည့်တော် သုံးယောက်တို့အားမိန့်တော်မူ၍” (မာကု၁၄း၃၃-၃၄)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ယော ဆက်ဟတ်သီဆိုသည်မှာ၊
(၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ ယောဆက်ဟတ်စ် သီကုံးသော “၀မ်းနည်းခြင်းများသည်းခံ”၊
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် “နှလုံးမသာစိတ်ပူပန်ခြင်း ရောက်တော်မူ၏” (မဿဲ၂၆း၃၇)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “အလွန်အင်မတန် လေးလံခြင်း”ဟူ၍ အဓိပ္ဓာယ်ပြန်ဆိုသည်။ ကုတ်ဝင်းပြောကြားသည်မှာ ၊ နှောက်ယှက် ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သော ယေရှု၏ခံစားမှုသည်၊ အများသူတို့ထဲကသီးခြားဖြစ်စေသည်။ လူအများတို့မှ အာရုံလွှင့်ပါးစေပါသည်” နက်နဲသောတွေးခေါ်မှုပင်ဖြစ်၏! အာရုံလွှင့်ပါး ပြီးရူးမတတ် သူသည်ပြင်းထန်သောခံစားမှုကို တစ်ကိုယ်တည်းခံစားခဲ့ရပါသည်။ ရှင်မဿဲကိုးကားခဲ့သည်မှာ၊ “ငါသည်သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံးအလွန်ညိုးငယ်ခြင်းရှိ ၏”(မဿ၂၆း၃၈)ဟူ၍ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “စိတ်နှလုံးအလွန်ညိုး ငယ်ခြင်း”ဟူသည်မှာ၊ “ပြင်းထန်သော၊သောကဝမ်းနည်းခြင်း” (ပြင်းထန်သော)စိုးရိမ် သောကလွမ်းမိုးခြင်းဟူ၍မည်၏။ ကုတ်ဝင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျ လျှက်၊ ဝမ်းနည်းခြင်းကိုကြားလျှက်၊ အသက်ရှုခြင်းပင်၊မွမ်းကြပ်ခဲ့ရ ၏”ဟူ၍ပြောကြားခဲ့ သည်။ ရိန်နက်ကာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊”ဝမ်းနည်းခြင်းများဝန်းရံလျှက်ရှိ၏၊ ခါးသီးခြင်း ပြည့်နှက်လျှက်ရှိ၏” ယေရှုဘုရားသည် ပူပန်ခြင်းသောကနှင့် ပြည့်နက်ခံစားခဲ့ရသည်။ ရှင်မာကုပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊ “မိန်းမောတွေဝေခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တောမူ၏” (ရှင်မကု ၁၄း၃၃)။ ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “မိန်းမောတွေဝေခြင်း” ဟူသည်မှာ၊ “လုံး၀ဥဿုံအံ့ဩခြင်း” (အထူး) “ကြောက်ရွံ၊ ရွံမုန်းခြင်း” (ရိန်နက်ကာ) “စိတ်ဖိစီးခြင်း”၊ “အလွန်းအလွန်ကြောက်ရွှံ့ခြင်းထဲ ကျရောက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခြင်း”(ဝက်စ်) ယောဆက် ဟတ်စ်သီကုံးရေးသားသည်မှာ၊
-လာပါ၊ ရွေးချယ်ခံ သူတော်စင်တို့
(၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ ယောဆက်ဟတ်စ်သီကုံးသော “ဂေသရှေမန်၊သံလွင်ပုံနှိပ် တိုက်!ကို”
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက်၊ အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း” (ရှင်လုကာ ၂၂း၄၄)။
၂။ ဒုတိယ၊ ပြင်းထန်သော ဝေသနာကို ခံရသောအကြောင်းအရင်း၊
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်၊ ခရစ်တော်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံ စားရသနည်း? ကျွန်ုပ်ပြောနေကျအတိုင်းပဲ၊ စာတန်မာန်နတ်၏ ထိုးနှက်ချက်ပင်ဖြစ်သည် သို့သော် သံသယဝင်စရာအကြောင်းရှိနေသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏ ထိုးနှက်ခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံစားရခြင်းအကြောင်း တစုံတစ်ရာမှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သခင်ရဲ့သာသနာအမှုတော်အစ၌ ဝိညာဉ်ဆိုးများက စုံစမ်းသွေးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သဲကန္တ ရတောထဲ၌ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်”သွေးဆောင်” ခဲ့သည်။ (မဿဲ၄း၃)။ သို့သော် “စိတ်ပူပန် ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏” ဟူ၍ ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ချွေးတော်သည် အသွေးကဲ့သို့ စီးကျခြင်းလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်းလည်းမရှိပါ။ သဲကန္တရတောထဲ၌ ယေရှုသည် စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို နုတ်ကပတ်တော်ကိုးကားခြင်းဖြင့် လွယ်လင့်တကူအောင်မြင် ကျော်လွှားနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော်ဂေသရှေမန်၌ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသည်သေ ခြင်းနှင့်အမျှ ကြီးမားသောခံစားချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ၊မက္ကီးပြောကြား ခဲ့သည်မှာ၊ “ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ဆုတောင်းစဉ် ဤခွက်ကိုရွှေ့ပေးတော်မူပါ” ဟူ၍ ဆုတောင်းခဲ့သည်ဆို၏။(လုကာ၂၂း၄၂)။ သေခြင်းခွက်ဖလားပင်ဖြစ်သည်။ သခင်သည် ထိုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ သေဆုံးမည်ကိုမလိုလားခဲ့ပေ။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, Volume V, p. 540; note on Hebrews 5:7).
၎င်းခါးသီးစွာခံစားခြင်းဝေသနာသည် အဖခမည်းတော် ထံတော်ပါးကလာရေက် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဝေသနာသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌
“ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏ အပြစ်များကို သူ့အပေါ်တင် တော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၆)။
စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ဂေသရှေမန်တွင် “အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့ အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏” (၂ကော ၅း၂၁)ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ “သခင်သည် ယ္ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စား ကျိန်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီး အပြစ် သားတို့၏နေရာ၌ အစားထိုးနေရာယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ကင်းစင်သောသူ သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် အစားခံစားရပြီ၊ သူ့အပေါ်၌တင်တော်မူပြီ” ဟူ၍ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ (C.H. Spurgeon, “'The Agony in Gethsemane,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971, volume XX, p. 593).
အာရုဏ်သည် ကိုယ်စားအသေခံရွေးနုတ်ရန် ဆိတ်နှစ်ကောင်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခရစ်တော်သည် ဒုတိယဆိတ်ပုံပမာဥယျာဉ်၌ ခံစားခဲ့ရပါသည်။ အပြစ်အတွက် အစားခံ သေဖို့ရန် ဒုတိယဆိတ်သည်ပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံစားခဲ့ပသည်။ ကြောက်ရွှံ့ခြင်းနှင့်ပြင်း ထန်စွာခံစားရသော ထိုတိရိစ္ဆာန်သည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ပြင်းထန်သောပုံရိပ်ကို ဖော်ပြ ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား၏ဥယျာဉ်တော်၌ ခံစားရသောဝေဒနာသည် ပြီးပြည့်စုံခြင်းကို ဖော်ပြပါသည်။
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက်၊ အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော် မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ် သတည်း( လုကာ၂၂း၄၄)။
ပရောဖက် ဟေရှာယ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကို နှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ၏။ သူသည် အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှမျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မညး” (ဟေရှာ ၅၃း၁၀)။
ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်တော်၌ ဤကဲ့သို့ အစပြုခဲ့၏!
(၁၇၉၄-၁၈၄၉ ဝီလျံဘီတက်ပန် သီကုံးရေးသားသော “ညဉ့်နက်သန်းခေါင် ယံဝေဒနာ”)။
“ညဉ့်နက်သန်ခေါင်အပြစ်သားတို့အဖို့၊ အသွေးစီးကျဝမ်းနည်း ခြင်းပြင်းထန်ခံစား” ဟူ၍ ဒေါက်တာဂျွန်ဂီးလ်ပြောကြားခဲ့၏။ “ယ္ခုတွင် သူသည်ခမည်းတော်၏ နှိပ်စက်ခြင်း ကိုခံရပြီဖြစ်၍ ဤနေရာ၌မပြီးပြတ်သေးပါ၊ ကားတိုင်ပေါ်ဝယ် ဝေဒနာခံစားရအုံးမည်ဖြစ် သည်။ သခင်သည်လေးလံသော အပြစ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးခံစားရခြင်းသည်ကား၊ ဘုရားသခင် ၏အမျက်ဒေါသ သွန်းလောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်၏နှိပ်စက်ခြင်း၊ သေခြင်းတိုင် အောင်နာကျင်စွာခံစားရခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းသည် ခန္တာကိုယ်နှင့်ဝိညာဉ်ခွဲခွါ ရသည့်တိုင်၊ ကားတိုင်ပေါ်အထိ ခံစားသွားခဲ့သည်”။ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard, Bearer,1989 reprint, volume I, p.334).
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏ အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်တင်တော်မူ၏” (ယေရှာ ၅၃း၆)။ ယောဆက်ဟတ်သီကုံးရေးသားခဲ့သည်မှာ၊
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက်၊ အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ ၏၊ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊ မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သ တည်း’ ‘(လုကာ ၂၂း၄၄))။
(၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ ယောဆက်ဟတ်စ် သီကုံးသော “ပြင်းထန်စွာဝေဒနာ” ဟူ
သောဓမ္မသီချင်းကို ညဉ့်နက်သန်ခေါင်ဝေဒနာသံစဉ်ဖြင့် သီဆိုသည်)။
“ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏ အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင် တော်မူ၏” (ဟေရှာ၅၃း၆)။
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုမိမိအပေါ် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ တင်တော် မူခဲ့၏ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၊ နောက်တနေ့ကားတိုင်ပေါ်အရောက် “မိမိကိုယ်ကို” အပေါ် အပြစ်ကိုတင်၍ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည် ယေရှုအားထိတ် လန့်စိုးရွှံ့စေသဖြင့် ချွေးသည်အသွေးတော်ကဲ့သို့စီးဆင်းခဲ့ရပါသည်!
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက်၊ အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊ မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သ တည်း’ ‘(လုကာ ၂၂း၄၄)။
ဟုတ်ပါပေ၏။ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်သူ့ကိုယ်ပေါ်တင်၍ ကားတိုင်ပေါ်သို့သွား ရောက်ခဲ့ပါသည်။
“ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင်သစ်တိုင်မှာ ခံတော်မူပြီ။” (၁ပေ၂း၂၄)။
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့သွားရောက်ပြီး ယေရှုကျွန်ုပ်တို့အဖို့ မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပြီး စီးခဲ့သည်ကိုသွားကြည့်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့အပြစ်ကြောင်း သေခြင်းကိုသွားရ မှာဖြစ်တယ်။ ယေရှုသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို မိမိပေါ်တင်တော်မူ၍ အသက် ရှင်ဖို့ရန် ဥယျာဉ်တော်မှကားတိုင်ခရီးသို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေးအားလုံး ပေးဆပ်သွား ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
ရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများမကြာခဏ၊ ကျွန်ုတို့အဖို့ယေရှုမည်ကဲ့သို့ ခံစားခဲ့ရသည် ကိုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်သို့ သွားရောက်ခံစားကြည့်ဖို့လိုပါသည်။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ် နှင့်ကားတိုင်သည် ခွဲခြားမရဝေဒနာခံရသော နေရာပင်ဖြစ်သည်။ “ငါတို့၌ထိုတရားသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏” (၁ကော၁း၁၈)။ ကျွန်ုပ်တို့ဘုန်းတန်ခိုးရှိစွာဖြင့်ဘုရာ သခင်အဖို့ အသက်ရှင်၍ အမူတော်ထမ်းဆောင်ဖို့ရန်၊ ခရစ်တော်သခင်၏၊ဂေသရှေမန်ဥ ယျာဉ်တော်နှင့်လက်ဝါးကားတိုင်တော်က တန်ဖိုးဖြစ်စေပါသည်! ခရစ်တော်ဘုရား၏နာ ကျဉ်ဝေဒနာကိုခံစားခြင်းအား ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် ခွန်အားတိုးစေမှာဖြစ်ပါ သည်!
(၁၈၂၀-၁၉၁၅၊ ဖန်နီဂျေခရောစဘီ သီကုံးရေးသားသော “တိုင်တော်နား”)။
မယုံကြည်သေးသောသူတို့ကို ကျွန်ုပ်ပြောလိုသည်မှာ မိတ်ဆွေသင့်အဖို့နာကျင်စွာ သွေးတော်စီးကျလာသည့်တိုင် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ ပြင်ထန်စွာခံစားပေးသွားသည် ကိုသိပါလျှက်နှင့် သင်ရှောင်ဖယ်သွားမှာလား? သခင်သည်သင့်အပြစ်အတွက် ဝေဒနာ ကိုခံစားခဲ့ပါသည်! မည်ကဲ့သို့သခင့်ရဲ့မေတ္တာကို ဆန့်ကျင်မည်နည်း?
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကို ခံလျှက်အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း” (လုကာ၂၂း၄၄)။
ယေရှုသည် သင့်အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်တင်တော်မူ၏ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်သို့သွား ရောက်ခြင်းသည် သင့်ကိုချစ်အားကြီး၍ဖြစ်သည်!
(အပြစ်များကို သည်းခံ၊ ၁၇၁၂-၁၇၆၈ ယောဆက်ဟတ်စ်သီကုံးပြီး၊ အပြစ်
ယနေ့ည သင်သူ့ကိုလက်ခံမည်လား?၊ သခင့်ကိုထာ၀ရမေတ္တာတော်နှင့်ချစ်နေ သောသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်မည်လား? သင့်အဖို့ပြင်းထန်စွာ ဝေဒနာခံစားပြီးသော ယေရှုသခင်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါ! ယ္ခုပင်ယုံကြည်လက်ခံပါ! သင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်မည် ဖြစ်ပြီး သင်သည်ထာ၀ရအသက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်ချန်မှ မာကု ၁၄း၃၂-၄၁ကိုဖတ်ကြား ၏ပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ၁၇၉၄-၁၈၄၉၊ ဝီလျံဘီ၊ တက်ပန် ရေးသားသီကုံးသော “ညဉ့်နက်သန်းခေါင်းယံဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေး ပါသည်။
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက်၊အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲသို့ဖြစ်သတည်း (လုကာ၂၂း၄၄)။
(ဟေဗြဲ ၅း၇၊ ၁ကော ၁၅း၃၊ လုကာ ၂၂း၃၇၊ ဟေရှာယ ၅၃း၁၂၊
ယေရှာယ ၅ဝး၆၊ ဆာလံ ၂၂း၁၆၊ ဇာခရိ ၁၂း၁၀၊ လုကာ ၂၂း၄၄။
၁။ ပထမ၊ သူ့၏ပြင်းစွာသော ဝေဒနာဖေါ်ပြခဲ့သည်။
မာကု၁၄း၃၂၊ ၃၃-၃၄၊ မဿဲ ၂၆း၃၇-၃၈
၂။ ဒုတိယ၊ ပြင်းထန်စွာခံရသော ဝေဒနာ၏အကြောင်းရင်း၊
မဿဲ ၄း၃၊ ဟေရှာယ ၅၃း၆၊ ၂ကော ၅း၂၁၊ ဟေရှာယ၅၃း၁၀၊ ၁ပေ ၂း၂၄၊